ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ဓာတ်ပုံက ပြောသော စကားများ
ဓာတ်ပုံက ပြောသော စကားများ
အင်တာနက် ထဲက ရတာပါ။ ခွေးနဲ့ ကြောင် ရန်ဘက်လို့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဆိုရိုး ရှိခဲ့သလို ကြောင်ဆိုတာ ကြွက်ခုတ်ဖို့ မွေးတာ လို့ ရှေးရိုး အစဉ်အလာ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ခုတော့ ပုံကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို ခံစား ရတယ်၊ ဘာတွေ တွေးမိတယ် ဆိုတာ မှတ်ချက်လေး ရေးခဲ့ ပေးပါနော့
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 12:40 AM
eek! cute!!! လိုချင်တယ် အဲဒီ ကြောင်လေးတွေ . .
လူတွေလဲ ကျား၊ ခြင်္သေ့တွေကို အစာကျွေးပြီး မွေးကြတယ်.. ဒါက စေတနာနဲ့ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူးပေါ့လေ။
ဒီ အိမ်မွေး အကောင်လေးတွေကတော့ သူဥာဏ်မီသလောက်ထဲမှာ အကောင်ငယ်လေးတွေ သူ့ကို ရန်မပြုမှန်း သိနေလို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ခုခေတ်မှာတော့ ခွေးနဲ့ ကြောင်လို အိမ်ထဲမှာနေတဲ့ကောင်လေးတွေ အတော်များများ အချင်းချင်း မကိုက်ကြတော့ပါဘူး။ အစာလဲ လုစားစရာ မလို၊ အချင်းချင်းလဲ စားစရာမလိုဘူးလေ။ ဒီလိုပဲ မြင်ရဖန် များနေတော့ မျက်စိနောက်ပြီးတော့လဲ အပင်ပန်းခံ လိုက်ကိုက်မနေတော့ဘူးနဲ့ တူတယ်။
သူတို့ချင်း ထမကိုက်တော့ ကိုယ်လဲ စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့.. :)
December 25, 2007 at 5:44 AM